မြန်မာ–တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ (ထိုင်ဝမ်) တို့သည် ၁၉၄၇ မှ ၁၉၄၉ အထိ တရားဝင်သံတမန်ဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်သဖြင့် တရားဝင်ဆက်ဆံမှုမရှိတော့ပေ။ ၂၀၁၀ ဝန်းကျင်မှစ၍ စီးပွားရေးအရ ဆက်ဆံမှုများရှိနေပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဒီဖက်တိုသံတမန်ဆက်ဆံရေးကိုစတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ တွင် သမ္မတဖြစ်လာသော ချိုင်အင်းဝမ်သည် မိမိချမှတ်ထားသော တောင်ဘက်ပေါ်လစီအသစ် (New Southbound Policy) အရ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်လိုသည် ဟုဆိုခဲ့သည်။
၃ စီးပွားရေးအရ ဆက်ဆံရေး
မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့်သာ တရားဝင်ဆက်ဆံမှုရှိသဖြင့် တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ၂၀၁၆ မတ်လ မတိုင်ခင်အထိ မြန်မာနိုင်ငံကိုထိုင်းနိုင်ငံရှိ ထိုင်ပေစီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရုံးမှတစ်ဆင့် ပူးတွဲတာဝန်ယူခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် တိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း (ICDF) သည် ရန်ကုန်မြို့၌ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ မတ်လ ၂၈ တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ထိုင်ပေစီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရုံးဟူ၍ အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုပါဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုင်ပေစီးပွားရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုရုံးသည် တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ ဒီဖက်တိုသံရုံးကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်သည်။
၂၀၁၅ ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် မြန်မာအစိုးရသည် ထိုင်ပေမြို့တော်၌ နှစ်ဖက်လုံးမှ ဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်နိုင်ရန်အလို့ငှာ မြန်မာကုန်သွယ်ရေးရုံးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
၁၉၅၀ တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအား အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
၁၉၄၇ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိတော့မည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံတို့သည် သံတမန်ဆက်ဆံရေးကို ထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ၁၉၄၈ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ကျင်းပခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ယဲကော်ချောင် (Ye Gongchao) သည် အထူးသံတမန်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သည်။:၈၃၃၁ ထိုအချိန်က တရုတ်နိုင်ငံ၌ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားနေခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် အနိုင်ရခဲ့သော ကွန်မြူနစ်သူပုန်များသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အာဏာရကိုမင်တန်အစိုးရသည်လည်း ထိုင်ဝမ်ကျွန်းသို့ တိမ်းရှောင်ခဲ့ရာ ၁၉၄၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၈ တွင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၀ ဇန်နဝါရီ ၁၀ တွင် သံရုံးကိုပါပိတ်ခဲ့ရသည်။
၁၉၅၀ ဇွန်လ ၈ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်သော တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ရာ ထိုင်ဝမ်ရောက်ကိုမင်တန်အစိုးရနှင့် အဆက်အဆံ လုံးဝမရှိတော့ပေ။ ၁၉၅၁ တွင် တရုတ်ပြည်မ၌ ကျန်ရှိနေသော ကိုမင်တန်တပ်သားများသည် မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ဘက်သို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။ မြန်မာအစိုးရသည် ကိုမင်တန်တပ်များ ဆုတ်ခွာပေးရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၌အရေးဆိုခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ကုလသမဂ္ဂမှ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သော စစ်ရေးကော်မရှင်တွင် တပ်ဆုတ်ခွာရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းဆွေးနွှေးခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်သည်ကြီးများအသင်းချုပ်သည် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာအစိုးရသည် ထိုင်ပေမြို့၌ ကုန်သွယ်ရေးရုံးကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၌ ထိုင်ဝမ်အစိုးရသည် ရန်ကုန်မြို့၌ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုလည်းကောင်း အသီးသီးဖွှင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၅ ဇွန်လ ၁၈ ရက်တွင် မင်ကိုတန်ပါတီ (ရီပတ်ဘလစ်ကန်ပါတီ) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ရှူရှင်းယင် (Xu Xinying) နှင့် ပါတီပြောခွင့်ရ ရှူရှီရွှန်း (Xu Shixun) တို့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နှစ် ၇၀ ပြည့်မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့အလည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ဧပြီ ၁၄ တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပျံ့ပွားမှုကို တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် ထိုင်ဝမ်အစိုးရမှ မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၇ နိုင်ငံကို မျက်နှာဖုံးပေါင်း ၁.၆ သန်းကို လှူဒါန်းခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ နိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူမှုအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ဧပြီလတွင် တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ လွှတ်တော်သည် တပ်မတော်အနေဖြင့် ပြည်သူတို့အပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကိုရှတ်ချသည့် ဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ထိုင်ဝမ်ရောက် မြန်မာများသည်လည်း စစ်အာဏာသိမ်းပိုက်မှုကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌တွေ့ရသော တရုတ်လေကြောင်းလိုင်း၏ Boeing 737-800 လေယာဉ်
မြန်မာနှင့်ထိုင်ဝမ်နှစ်နိုင်ငံအကြား တိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုရှိပြီး ပျံသန်းသည့်မြို့များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ နိုင်ငံရပ်ခြားသံရုံးများ။ တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန။
↑ Chuqiao Chen။ "Myanmar-Taiwan relations and the ‘China factor’"၊ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန၊ ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀။
↑ 駐館位置及聯絡方式။ ကောင်စစ်ဝန်ရေးရာ သံတမန်ရေးဝန်ကြီးဌာန။ 2016-01-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 緬甸聯邦共和國設立駐臺北貿易辦事處 Archived 22 November 2020 at the Wayback Machine.，中華民國外交部
↑ 駐臺外國機構။ 中華民國外交部။
↑ လီရှင်း (အယ်ဒီတာချုပ်)၊ ခေတ်သစ်သမိုင်းအင်စတီကျု၏ သုတေသနရုံး၊ တရုတ်လူမှုရေးသိပ္ပံအကယ်ဒမီ တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံသမိုင်း အယ်ဒီတာချုပ် ဟန်ရှင်းဖူနှင့် ကျန်ကေးဖူ, ed. (2011)။ တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံမှတ်တမ်း။ ဘေကျင်း: Zhonghua Bookstore။
↑ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့်အခြားနိုင်ငံများ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်သည့်နေ့စွဲ ဇယားအကျဉ်းချုပ်။ 2016-05-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "ကုလသမဂ္ဂနဲ့မြန်မာ နှစ် ၇ဝ"၊ ဘီဘီစီမြန်မာ၊ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၁၈။
↑ "Taiwan, Burma sign trade pact"၊ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန။ 24 October 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 30 May 2013။
↑ မြန်မာပြည်သို့သွားသည်။ မင်ကိုတန်ပါတီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပါတီအတွေးအမြင်တွေ ဖလှယ်ဖို့သွားရောက်ခဲ့ (၁၉ ဇွန် ၂၀၁၅)။ ၁၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 呂伊萱။ "口罩援助「新南向」名單公布：印菲越澳緬星馬及印度8國"၊ Liberty Times Net၊ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၀။ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ အရှေ့အာရှပစိဖိတ်ဌာနခွဲ (၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁)။ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေများအပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်။ တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန။
↑ "Taiwan takes tougher line against Myanmar regime"၊ Nikkei Asia၊ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၂၁။
↑ "Myanmar Communities in Taiwan Protest Military Coup After ‘Deadliest Day’"၊ ဗွီအိုအေ၊ ၂၈ မတ် ၂၀၂၁။
↑ "Taiwan's Myanmar community denounces coup with defiant songs"၊ ရိုက်တာ၊ ၂၁ မတ် ၂၀၂၁။
↑ Lai Wenxuan (၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉)။ No need to turn around! Myanmar Airways will fly non-stop to Taipei-Wacheng in4hours on 1/18 next year.။ ETtoday News Cloud။ ၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာ–တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ_ဆက်ဆံရေး&oldid=745547" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဇွန် ၂၀၂၂၊ ၀၉:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။